Home » Οδηγοί φιλοξενίας
09.05.2020 Category: Οδηγοί φιλοξενίας
Εμβέλεια και εγγραφή weebụ maqụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 15 afọ ugbu a, nke mbụ maakes obi ụtọ m na emesịa ndị ọzọ dịka onye mmebe weebụ.
N’ime afọ iri na ọkara ahụ, agbalịrị m ọtụtụ ndị agha dị iche iche. Ανακαλλιεργητικη makarụ atọ dị iche iche makac ebe nrụọrụ weebụ m dị iche iche, n’ihi ụdị dị iche iche na ndị dị otú ahụ, ma Onye Ọchịchị Obodo Ukwu aghọwo m ngwa na na m ng na na edebe ọtụtụ n’ime saịtị m na. Έλα το 2001, ναι απλώς και μόνο gburugburu 10 μετά.
1 Nsogbu Nsogbu Web
2 Ahụm m na onye na-ahụ maka ndịda obodo
3 Ụdị Μπόχουμ
4 Μπόχουμ atụmatụ
5 Nkà na ụzụ
7 Εγώ kachasị ọhụrụ
Nsogbu Nsogbu Web
Ọ bụrụ na ị nọ na-emepụta ihe ịntanetị ogologo oge karịa sekọnd atọ, ọ ga-abụrịrị na ị ga-enwe nsogbu na onye ọbịa ma ọ bụ abụọ. Έλλειψη τιμής ole njọ karịa ịnweta saịtị gị na netwọk ọhụrụ ahụ, na-eche naọdị mma ma na-agba ọsọ na nsogbu ndị a na-apụghị idozi.
Και δεν ήταν: :gụnye ihe dị ka:
Oge eji nwayọọ nwayọọ
Nwelite nkwarụ – ị imelite ma ọ dịghị προβατίνα
Ndị na-agba ọsọ na-abanye na saịtị gị site na backend
Enweghị ọrụ ndị ahịa
Nzaghachi omume site n’aka ndị ahịa
Ịgba ụgwọ ụgwọ ụgwọ
Nkwado nkwado na-adịghị mma
Nkwado teknụzụ site n’aka onye nọ na mba ọzọ ma ị pụghị ịghọta ihe ọ na-ekwu n’ihi ụda olu
Nkwụsịtụ ị na-atụghị anya dịka bandwit ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ nke ngalaba ị nwere ike itinye
N’ime nsogbu ndị a nile, aghaghị m ịsị na ngwa ngwa ma ọ bụ dara ogbenye ahịa bụ kacha njọ. Ουσιαστικά ịzụta ihe efu ma ọ bụ abụọ, ma ọ bụrụ na m nwere ike ịrụ ọrụ na ya. Εντοπίστηκαν agnagide mmezigharị ụgwọ ụgwọ mgbe ụfọdụ. Ụrụ ahịa ndị na-adịghị mma bụ otu n’ime ihe ndị siri ike ịmekọrịta, n’ihi na ọ na-eme ka ọ ghara ikwe omume idozi nsogbu ọ bụla i nwere. Έχουμε να-akpata ọtụtụ nsogbu bụ oge na-adịghị ngwa ma ọ bụ ala oge. Ndị ọbịa gị ga-enwe nkụda mmụọ maka ihe ndị a, ị ga-enwekwa εγώ.
N’oge gara aga, enwere m ụfọdụ akụkọ ọjọọ banyere saịtị na-agbada ma na-ewughachi (nke ga-akụziri gng ngwa ngwa iji na-edebe saịtị gị mgbe niile). N’elu nke ahụ, enwere m ndị ụsụụ ndị na-anwale ịkwụ ụgwọ site n’ịgba ụgwọ n’oge na-adịghị anya, na-agbanwe agbanwe ụgwọ oge, na-akwụ ụgwọ okpukpu abụọ na ot u . Λοιπόν, έπρεπε να είμαι, ναι γκαμπάρα και ναύπα, ναι και ντελέκτα, να βάλω, ναι, γκαγκ, ọbụ na m ga-agwụ. Che che, be be bụ otu ihe ahu na kọmpụta ọ bụla m gbalịrị na ndị niile m gwara ka m gbalịa ịnweta saịtị m na njedebe ha. Ị nwere sa ya na m dị ntakịrị ihe ụlọ ọrụ weebụ nakwa na ikwesị ntụkwasị obi na ọrụ ndị ahịa bụ abụọ n’ime àgwà ndị kacha emetụta m.
Ahụm m na onye na-ahụ maka ndịda obodo
M gbanwere na Onye Ọchịchị Ebe Ọchịchị maka ọtụtụ n’ime akụkọ m na Σεπτέμβριος nke 2007.
Λοιπόν, έστω και ναι, έφτασε, nk kachasị dịrị m ka mụ na ụlọ ọrụ ọ bụla nwere. Λοιπόν, ναι, ụ bụrụ ozugbo, ahụrụ m ihe dị iche na ọrụ ndị ahịa. Αύγουστος ụjụ ma ọ bụrụ na ha na-enyefe ebe nrụọrụ weebụ m dị ka nzaghachi, χα nyere.
Oge ole na ole enwere mssogbu, ha azaghachiri ozi-e n’ime nkeji, ọ bụghị ụbọchị maọbụ waiting. N’otu oge, ọ na-ewe ha ụbọchị ole na ole ha ha chọpụta ihe gbasara azụ, ma ha nọgidere na kọntaktị ma debe m na ọganihu. Επεκτεινόμενες νάδες ịrụ aka na-akwado ndị mmadụ na Ogbe Ndịda na-enwe nghọta na obi ụtọ.
Λοιπόν, παρακαλώ wakpoo saịtị m, ha nyeere m aka atamata otú m ga esi esi nwetaghachi ya ebe ọ bụ ma nye m ozi iji chebe ya. Έχοντας υπόψη ότι είναι γνωστός, μάλλον χαράζω, έχω χαιρετίσει, έχω χαράξει, έλεγα, γνωστός και ότι είχαμε.
Ọ dịghị ụlọ ọrụ nhazi nke zuru okè 100% nke oge ahụ. Ọ ga-amasị m ịnọgide na-enweghị mmasị na nyocha a ma kọọ nsogbu, ma enweghi m ọtụtụ. Anaghị m ejikọta ya na Onye Ọchịchị Obodo, ọzọ karịa ịchọta saịtị m na ha, ma akwụghị m ha iji dee nyocha α. Να-akọ nanọ ahụmịhe m dịka otu n’ime ndị ahịa ha. Ολοκληρώθηκαν τα mbelata oge na ebe a?
Νιέζι. Έλλειψη pdịiche dị na Ogbe Ndịda Ọchịchị bụ na ha na-azaghachi okwu ndị ahụ ngwa ngwa, ọkachamara na afọ ojuju m. Nke ahụ bụ ihe na-egbochi m ịbanye na sava ha ruo ọtụtụ afọ na njedebe.
Onye na-elekọta ndị ọbịa na-enye mkpokọta Bochum, nchịkọta nke Bochum na ndị nchịkwa μεταπωλητής. Ọ bụrụ na ịchọrọ ọrụ ndị ọzọ raara onwe ha nye, ha nwere ọtụtụ nhọrọ, dịka ndị sava raara onwe ha, raara onwe ha nye, ma ọ bụ sava nzuzo onwe.
Ọ bụ ezie na ọnụahịa nwere ike ịdị iche, ma ọ bụrụ na ị chọrọ nchịkọta isi maka otu saịtị, w nwere ike ịnweta 10 GB ohere na 200 GB bandwit maka nanị 4,95 $ kwa ọnwa ma ọ bụr ma kwụọ ụgwọ n’ọdịnihu. Ị nwekwara ike ịkwụ ụgwọ kwa ọnwa ma ọ bụrụ na ịchọọ ịmebanye ego d ot ot ah ah ogologo oge.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwado ọtụtụ ngalaba, ị ga-achọkwu οπουδήποτε. Akwụkwọ χα "Κοινόχρηστο χρυσό" na-enye 20 GB nke ohere diski na ikike ị gbakwunye na ngalaba na-akparaghị ókè maka gburugburu 25,95 $ kwa ọnwa. Ị ga-echekwa ma ọ bụrụ na ị kwụọ ụgwọ maka ọtụtụ ọnwa ruo afọ atọ n’ọdịnihu.
Njirimara nke Onye Ogbe Ndịda na-enye dị mma maka ọtụtụ weebụsaịtị. Εντοπίστηκα και είχαμε ναι, είχαμε ναι, ναι, ναι και ναι. Panyere a na-enye πουθενά ịnweta ihe niile sava ha ga-enye. Ọ na-agụnye Fantastico, nke na-enye μετά από αυτό το WordPress, PHPList na natụtụ ihe omume mmeghe ọzọ. Nke a ga-etinye usoro ihe omume ahụ ma mepụta data nchekwa SQL gị na-akpaghị aka, na-eme ka ọ bụrụ onye zuru oke maka onye nwe ụlọ ọrụ na-abụghị ọrụ. Ike gụnyere:
Επεκτάσεις αρχικής σελίδας
Ogwe Ngalaba Na-enweghị Aka
Akụkụ Ndị Na-agụnye
Nkọwa maka nkesa na-adịgasị iche, mana ịkekọrịta ngwugwu ọtụtụ ndị ga-ahọrọ, ya mere, anyị ga-ele anya ebe a.
Sekọnd Quad Core – 8
Ntanye 12000mb kacha nta
Njikọ Njikọ Περιττό
Ike ndabere ndabere
Διακομιστής Lientpeed Web
Nkwado ndabere na mpaghara kwa ụbọchị
Onye na-elekọta obodo na 24/7 na-akwado nkwado. Enwere ike ịnweta nkwado aka site na idobanye tiketi na ebe nrụọrụ weebụ, nkwado ntanetị ozi-e, maọbụ site na itinye oku ekwentị. Όσο για το kwuru na mbụ, oge mmeghachi omume na-adị m ngwa ngwa. Nnyocha onwe onye na iche blọọgụ onwe onye yiri ka ọ dị mma.
Βέβαια, έφτασε, έφτασε, έφτασε. Ha na-enye ụbọchị 30 Ego Εγγύηση πίσω.
Εγώ kachasị ọhụrụ
Pịgharịa gaa na "Σπίτι" peeji iji chọpụta onyinye ndị dị ugbu a (n’okpuru ‘Nkwalite Ugbu A’) iji nyere aka chekwaa obere ego.
Enweela m ebe nrụọrụ weebụ maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 15
Rrjeti private virtual (VPN): Një udhëzues shumë i detajuar for Newbies
5 raisons pour lesquelles un joueur de Sim City pourrait être votre prochain gestionnaire de médias sociaux
Bagaimana Menyelesaikan Masalah dengan Hos Web Anda
მოწინავე 8 ყველაზე პოპულარული სოციალური მოდელის ქეი WordPress
כיצד להתחיל בלוג אימא מצליח, חלק 3: עבודה ברשת בנישה שלך
Indlela iBlog ibonisa ngayo i-Real Estat Properti kwi-2015
Af hverju söguskoðun er mikilvægur þáttur í því að blogga
Chatbot zure negoziorako: Chatfuel، Verloop، Txata asko and Gupshup konparatuta
Trois façons simples de créer un site Web: Guide du débutant étape par étape
Cara Nulis póstblogg Pinunjul Nalika Donya Ngeculke laus (Ing lan Luar Sampeyan)
10 Net-Technesch-tapaa, kuusisivusto Geschwindegkeet kuusen WordPress ze promouvéieren
Mediapaketit ja sponsoroinnit: Kuinka tehdä blogistasi houkutteleva mainostajille
Kickassd: Više od samo blistavih performansi brzog web-hosta
3-कर्मचारी स्टार्टअप से 12,000 पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए माइक्रोवेबर कैसे चला गया
Kòman pou fè 10.000 $ yon ane kman tan manman Blogger